Sezvo vhidhiyo iyi kubva Mutengesi inoratidza, chikamu chikuru chenguva yekutengesa inobuda inopedzwa kubatanidza kana kuronga kubatana nemutengi. SalesRep inoshandisa kufona otomatiki ine yakazvimiririra, yechisikigo mitauro yekugadzirisa chikuva kuti utore iko kuedza kubva kumashure kwetimu rako rekutengesa, zvichivagonesa kuisa pfungwa dzavo dzese pakutengesa - kwete kubatana.
Tevera kuteedzana - Chiito kuyerera kwekufona, zvinyorwa uye maemail system ichaita kuti iende mushure meimwe yega lead lead. SalesRep.ai inoshanda zvakanyatso shanda pamwe nesangano rako kumisikidza maratidziro anoenderana nekwekufamba kwekutengesa kutungamira kwako kuri. Kana usati wambotaura nemutungamiri, matanho akakodzera ekuteedzana anotorwa. Kana iwe uchitevera kubva kune yapfuura yekutengesa kufona imwe yakatangwa. Wedzera chero yekutevera nzira inodiwa kuSalesRep.ai.